Ziziphi iindlela ze-SEO ezona zilungelelaniso zezithuthi ezinkulu?
Nazi ezinye iindlela zokusebenzisa ii-SEO zamacacisa ngeendlela ezibalulekileyo zendlela kunye nezinga lokuguqulwa. Qinisekisa ukujonga ezi zintandathu ezilula ezizayo ngezantsi:
Ukufunda idatha yomsebenzisi
Ukulibala nge-Optimization ye-Injini ye-Search. Ewe, injongo ephambili yengxenye yengonyama ye-SEO maqhinga iphumelela ukuqonda ngokubhekiselele kwiirobhothi zenjini. Ngexesha elifanayo, ukuphuculwa kokusesha malunga nokuhlangabezana neemfuno zangempela zabathengi bakho abajoliswe kuzo; Ndiyathetha ngokufumanisa ukuba abantu bafuna ntoni, kwaye niyinike yona nomxholo wakho. Ngoko, bhetele obaziyo abaphulaphuli bakho, amava omsebenzisi obulunga kakhulu owenzayo. Kwaye oku kufuneka kukhokelela kwindawo ephezulu kwi-SERPs - kansas city wordpress developer. Indlela elula yokujongana nale nto ithetha ngqo kwiindwendwe zakho, kwaye ndiyaphakamisa ukuba uphendule imibuzo yabo rhoqo rhoqo kwisihloko esifanelekileyo, ixhaswe nabanye abasebenzisi ukubonelela zabo izisombululo ngokunjalo. Kwakhona, ingaba yinto enhle kakhulu ukukopisha-unamathisele eminye imibuzo engundoqo ukuyisebenzisa ngokuthe ngqo kwiintloko zeeblogi zakho.
Umsebenzi wekhasi lokumisela
Ngokuqhelekileyo, xa izikhonkco zakho ziboniswa uluhlu lwe-SERPs , abantu bahamba kwi-homepage yewebhu okanye iblogi yakho yokuxhasa. Kodwa ukuba ujongene neprojekthi yorhwebo, umzekelo, kwisitoreji se-intanethi, ungcono ube nekhasi lokuzimela elikhethekileyo nelungileyo ukuze kuveliswe ukuthengisa okungcono okanye abanye abalandeli. Ukudala iphepha lokuhlawula kuthetha ukuba nekhasi lewebhu elizinikezelwe liqhutywa ngesihloko esithile. Ngokubhekiselele kwimibuzo ye-SEO, ndincoma apha ukwenza konke ukusetyenziswa kusetyenziswa inyathelo ngesinyathelo. Okokuqala, ngaphambi kokuba uqale ukwakhiwa kwekhasi lokufika, kufuneka ukhethe ibinzana elingundoqo lomsila. Ngaleyo ndlela, sebenzisa isihloko sayo kunye nenkcazelo ye-meta. Yenza iphepha lakho lokumisa elakhiwe ngamagama angama-2,000, njengokuba kukho indawo ekhangelekileyo ebonakalayo ephezulu kwiziphumo zophando zeGoogle. Musa ukufaka imali ekutyala imali ethile kwi-web design. Ekugqibeleni, zama ukufumana ubungqina kwiphepha lakho lokumisa kwaye ujabulele ukuhlala etroneni.
Yenza umxholo wakho
Iindlela ezilungileyo ze-SEO zomxholo zisekelwe kwimbono elula - umxholo kukumkani. Ewe, ndiyingozi apha, kuba ingcamango enengqiqo yokusebenza kanzima kumxholo wakho ukufezekisa iimpawu eziphezulu zekhwalithi kunye nesipili. Nangona kunjalo, kunokuba luphelele kwaye lusebenze ixesha. Esikhundleni sokwenza njalo, ndincoma ukufaka izicelo ezithile ze-SEO ezintle kwiimibhalo zetekisi. Se benzisa nje umxholo ofanayo uhlaziywa kwiifom ezahlukeneyo, umzekelo, ukuba uboniswe ukusetyenziswa okusebenzayo nangokufanelekileyo. Ndiyathetha ukuba unokwenza lula ukuba izithuba zeblogi zakho zenziwe kwakhona (ubuncinci) zibe zifundo ezixabisekileyo zevidiyo, iintetho ezonwabisayo, iipodcasts ezimnandi kunye ne-infographics, okanye ezinye izinto ezixhasa inkxaso kwifomati yePD. Ngenxa yesiphumo esiphezulu, yenza ezo ziqabane zedatha-nxaxheba yolwazi ukuze ufumane unxibelelwano olongezelelweyo kunye nezithuthi. Awusayi kuze uzisole ukuchitha ixesha kwilo xesha.